मृर्गौला पीडित लालमायाँ छटपटाउँदै बीर अस्पतालमा, आफन्तले गरे सहयोगको याचना | Sindhu Jwala
भाद्र ७, काठमाडौं । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा १३ अन्र्तगत ठूलोसिरुवारी जंगलछापकी ५३ वर्षीय लालमायाँ श्रेष्ठ दुवै मृर्गाैला गुमाएकी पीडित हुन् । उनी अहिले दुई साता अघि देखी बीर अस्पतालमा उपचारर्थ छिन् ।
आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेकी लालमायाँँलाई बाँच्ने रहर छ तर उपचार गर्ने उनीसंग पैसाको अभाव ज्यादै छ । लालमायाँका दुई छोरी रहेपनि दुवै विवाह भईसकेका छन भने श्रीमान गाउँमै खेती किसानी र गाईबस्तुको हेरचाहमा छन् । दुवै मृगौला फेल भएर आफन्तको सहयोगमा बीर अस्पताल पु¥याएकी लालमायाँलाई परोपकारी मनका धनी कसैले सहयोग गरिदिए बाँच्ने आशा अझै हराएको छैन् । आँशु खसाल्दै उनले भनिन, ‘कसैले सहयोग गरिदिए बाँच्ने थिएँकी ?’
उनले सहयोगको याचना गरेसंगै केही सहयोगी मनहरु पनि देखिएका छन् । उनको उपचारको सहयोगका लागि भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) चौतारा साँगाचोकगढि वडा नं १३–काठमाण्डौ सम्पर्क समन्वय समितिद्वारा एकै दिन २० हजार माथि सहयोग संकलन भएको छ । यसको पहल कदमी भने यातायाता व्यवसायी सागर श्रेष्ठले गरेका छन् । लालमायाको उपचारको लागि केही देश विदेशमा रहेका साथीभाईहरुबाट सहयोग गरिने बचन आएको यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय सदसस्य समेत रहेका सागरले बताए । ‘सहयोग जुटाउन सकियो भने उहाँको उपचार सम्भव रहेछ’, सागरले सिन्धुज्वालासंग भने । उनका अनुसार मृगौला प्रत्यारोपन गर्न परे ३० लाख सम्म जुटाउन सके सम्भव हुने देखिन्छ । ‘राजनैतिक दलका नेता तथा पहुँच पुगेका कार्यकर्ताहरुको उपचार गर्न करोड भन्दा माथि राज्यले खर्चिन्छ तर सामन्य नागरिकको पैसाकै कारण उपचार गर्न मुश्किल छ,’ सागरले थपे । ठुलोसिरुवारी साविकको वडा नम्बर ६ मा घर भएकी लालमायाको उपचारको लागि आफु निरन्तर खटिएको सागरले बताए । सागर लालमायाको छिमेकी समेत हुन् । बीर अस्पतालमा उपचारत गराईरहेकी लालमायाले आफ्नै छोरी सीता श्रेष्ठको नाममा रहेको एनसिसि बैंकको ०९४०००००२५००८ खाता नम्बरमा देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई आग्रह समेत गरेकी छिन् । सम्पर्कको लागि भने लालमायाको उपचारको लागि सहयोग अभियान्ता सागरले आफ्नो मोवाईल नम्बर ९८५११५३७९४ र पीडित लालमायाकी छोरी सीताले ९८६०४३०८८९ नम्बर सार्वजनिक गरेका छन् ।
This entry was posted in समाचार, जीवनशैली / स्वास्थ्य, शिक्षा. Bookmark the permalink.
रत्नराज्य मावि चनौटेको अत्याधुनिक भवन उद्घाटन राष्ट्रपतिले गर्ने
नेपालमा भेटियो तेस्रो कोरोना संक्रमित
सिन्धुपाल्चोकका विद्यालय प्रविधिमैत्री बनाईदै, पहिलो सुरुवात सिद्विगणेशबाट